ဂူဂဲလ်တွင် AR သက်ရောက်မှုများ (နေရာများ၊ ဂြိုဟ်များနှင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်) ဖြင့် 3D မော်ဒယ်များ🥇 Emulator.online ▷🥇
သိပ်မကြာသေးခင်ကငါတို့မြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းပြောခဲ့တယ် တိုးချဲ့အဖြစ်မှန်အတွက်တိရိစ္ဆာန်များ၏ 3D မော်ဒယ်များ, con un efecto verdaderamente realista. De hecho, basta con buscar en Google, utilizando el smartphone (no funciona desde un PC), el nombre de un animal, por ejemplo el perro, para ver aparecer un botón "Ver en 3D". Al presionar este botón, no solo el animal aparece en la pantalla moviéndose como si fuera real, sino que también es posible verlo con un efecto de realidad aumentada como si estuviera frenteanosotros, en el piso de nuestra habitación, y también tomar una foto del mismo.
Si bien todos los blogs y periódicos han hablado de animales 3D, que se viralizó hace como un año, nadie se ha dado cuenta de que en Google es posible ver en modelos 3D y con efecto de realidad aumentada no solo animales, sino también muchas otras cosas. . Hay más de 100 elementos 3D para usar por diversión, para la escuela y para el estudio, que se pueden encontrar en Google haciendo búsquedas específicas, todo con la posibilidad de poder verlos en realidad aumentada en smartphones compatibles (casi todos los smartphones modernos Android y iPhone).
ထို့ကြောင့်အောက်တွင်များစွာသောစာရင်း၏ပြည့်စုံသောစာရင်း AR effect ဖြင့်ဂူဂဲလ်အတွက် 3D မော်ဒယ်များ. Tenga en cuenta que para que el "3D တွင်ကြည့်ပါ"Es necesario buscar con palabras específicas exactas y eso casi siempre no funciona si intentas hacer esa búsqueda traduciéndola al italiano u otros idiomas. Aún puedes intentar buscar cualquier cosa buscando el nombre y luego la palabra"3d".
ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့ 2020 အတွက်ဂူဂဲလ်မှဒီဂျစ်တယ်မော်ကွန်းတိုက်များနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် CyArk y la Universidad del Sur de Florida para llevarala investigación modelos 3D de 37 sitios históricos y culturales. Simplemente busque el nombre original (por lo que no hay traducciones, solo el que no está entre paréntesis en la lista) de uno de los monumentos en su teléfono y desplácese hacia abajo hasta encontrar la tecla que lo muestra en 3D.
Chunakhola Masjid - Nime Dome ဗလီ - Shait Gombuj Masjid (ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်သမိုင်းဝင်ဗလီ ၃ ခုရှိသည်။ တစ်ခုစီတွင် 3D ပုံစံရှိသည်။
ဝိန်း Fort York ကအမျိုးသားသမိုင်းဝင်ဆိုက်ကို (ကနေဒါ)
Brandenburg ဂိတ် (ဂျာမနီ)
Pirene စမ်းရေတွင်း (ကောရိန္သု၊ ဂရိ)
အပိုလို၏ဗိမာန် (Naxos, ဂရိ)
အိန္ဒိယ၏ Gateway မှာ (အိန္ဒိယ)
sh ရှmun၏ဗိမာန်တော်အခန်း (လက်ဘနွန်)
Eim ya kyaung ဘုရားကျောင်း (မြန်မာ)
Hagia Sophia, Ohrid ၏ဘုရားကျောင်း (မက်ဒီဒိုးနီးယားရှိ Ohrid)
Jaulian ရှိဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် (ပါကစ္စတန်)
Chavin က de HuántarမှာLanzón stele - Chchan Tschudi နန်းတော်ရှိထုံးတမ်းစဉ်လာအခန်းများ - Tschudi နန်းတော်, ချမ်းချန်း (ပီရူးတွင်)
Moai, Ahu Nau Nau - Moai, Ahu Ature Huki - Moai, Rano Raraku (အီစတာကျွန်း / ရက်ရာနူ)
San Ananías၏အိမ် (ဆီးရီးယား)
Lukang Longshan ဘုရားကျောင်း (တိုင်ဝမ်)
ဂရိတ်ဗလီ၊ Kilwa ကျွန်း (တန်ဇန်းနီးယား)
Autthaya - Wat Phra Si Sanphet (ထိုင်း)
Dကရာဇ် Tu Duc ၏ Mausoleum (ဗီယက်နမ်)
Edinburgh ရဲတိုက် (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း)
လင်ကွန်းသတိရအောက်မေ့ပွဲ - မာတင်လူသာကင်းအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး - အစိမ်းရောင်စားပွဲ - နာဆာ Apollo 1 မစ်ရှင်သတိရအောက်မေ့ - သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး (ယူအက်စ်)
Chauvet ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (Chauvet ဂူ၊ ဂူပန်းချီကားများ)
အဖတ်ကိုလည်း: အီတလီနှင့်ကမ္ဘာတလွှားရှိ 3D အွန်လိုင်းရှိပန်းခြံများ၊ ပြတိုက်များ၊
Google နှင့် နာဆာ se han unido para traer una gran colección de cuerpos celestes en 3Dasu teléfono inteligente, no solo planetas y lunas, sino también algunos objetos como asteroides como Ceres y Vesta. Puede encontrar versiones AR de la mayoría de estos elementos simplemente buscando sus nombres (búsquelos en inglés con la palabra 3D y Nasa, por ejemplo မာကျူရီ 3D o Venus 3D Nasa) y desplazarse hacia abajo hasta encontrar el "3D တွင်ကြည့်ပါ".
ဂြိုလ်များ၊ လများ၊: ပြဒါး, venus, မြေကြီးတပြင်, luna, Marte, မင်္ဂလာပါ, ငါတို့ပြောတယ်, ဂျူပီတာ, ဥရောပ, Callisto, Ganymede, Saturn, titan, Mimas, သေပြီ, ကဗျာ, Hyperion, uranus, Umbriel, တိုက်တန်းနစ်, Oberon, Ariel, Neptune, ထရီတန်, ပလူတို.
အာကာသယာဉ်များ၊ ဂြိုဟ်တုများနှင့်အခြားအရာများ 70 မီတာ 3d အင်တင်နာနာနာ, Apollo 11 စစ်ဌာနချုပ် module, Cassini, သိချင်စိတ်, မြစ်ဝကျွန်းပေါ် II, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း, Juno, နီးလ်အမ်းစထရောင်း၏အာကာသစင်း, SMAP, Spirit, Voyager 1
အကယ်၍ သင် ISS ကို 3D မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Google အသုံးပြုတဲ့ AR နည်းပညာကိုအခြေခံပြီး NASA's Spacecraft AR app ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
အဖတ်ကိုလည်း: တယ်လီစကုပ်အွန်လိုင်းက 3D ရှိအာကာသ၊ ကြယ်များနှင့်ကောင်းကင်သို့စူးစမ်းလေ့လာရန်
အာကာသစူးစမ်းလေ့လာပြီးပါကလူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို 3D ဖြင့်လေ့လာခြင်းဖြင့်လည်းလေ့လာနိုင်သည် မြင်နိုင်သောခန္ဓာကိုယ်. Luego puede buscar en Google, desde su teléfono inteligente, los términos en inglés de muchas partes del cuerpo humano y otros elementos de la biología, junto con las palabras 3D မြင်နိုင်သောခန္ဓာကိုယ် တိုးချဲ့အဖြစ်မှန်အတွက်မော်ဒယ်များရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နိုင်။
ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများ။ (အမြဲတမ်းဥပမာ Visibile Body 3D ဖြင့်ရှာဖွေပါ နံရိုးခန္ဓာကိုယ်မြင်နိုင် 3d): နောက်ဆက်တွဲ, ဦးနှောက်, နင်, cranial အာရုံကြော, နား, ojo, သို့, က, Mano မှ, နှလုံး, အဆုတ်, Boca, ကြွက်သားမျှင်, လည်ပင်း, နှာခေါင်း, Ovary, တင်ဆုံ, ခြေကုပ်, သွေးနီဥ, နံရိုး, hombro, အရိုးစု, အူသိမ် / အူမကြီး, အစာအိမ်, သရက်, ဝှေးစေ့, thoracic မြှေး, ဘာသာစကား, ရေတံခွန် ,ကျောရိုး
အမြဲတမ်းရှာဖွေမှုများ၌ဝေါဟာရများကိုထည့်ပါ 3D မြင်နိုင်သောခန္ဓာကိုယ် အောက်ပါခန္ဓာဗေဒစနစ်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်, သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်, endocrine စနစ်, ထုတ်ယူစနစ်, အမျိုးသမီးမျိုးပွားမှုစနစ်, လူ့အစာခြေစနစ်, ကိန်းသေစနစ်ကို, ဖဲစနစ်, အထီးမျိုးပွားမှုစနစ်, ကြွက်သားစနစ်, အာရုံကြောစနစ်, အရံအာရုံကြောစနစ်, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်, အရိုးစနစ်, အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်း, ဆီးစနစ်
ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံ: တိရိစ္ဆာန်ဆဲလ်, ဘက်တီးရီးယားဆေးတောင့်, ဘက်တီးရီးယား, ဆဲလ်အမှေးပါး, ဆယ်လူလာနံရံ, ဗဟို vacuole, ခရိုမိုတီ, ရေတွင်းများ, တောင်တန်းများ, endoplasmic reticulum, eukaryote, fimbria, ကွမ်းသီး, Golgi ယန္တရား, mitochondria, နျူကလီးယားအမြှေးပါး, နျူကလိ, အပင်ဆဲလ်, ပလာစမာအမြှေးပါး, plasmids, prokaryotic, ရိုင်ဗိုဇုမ်းများ, ကြမ်းတမ်းသော endoplasmic reticulum, ချောမွေ့ endoplasmic reticulum
ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့် 3D model များစွာရှိသေးသည်။ ၎င်းတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဤစာရင်းထဲသို့ထပ်ထည့်မည်။ (အကယ်၍ သင်သည် Google ရှိအခြား 3D မော်ဒယ်များကိုသတင်းပို့လိုပါကကျွန်ုပ်အားမှတ်ချက်ပေးပါ) ။
Ray Tracing ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။